သြဂုတ်လ 2015 |5၏စာမျက်နှာ 55 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2015 » သြဂုတ်လ (စာမျက်နှာ 5)
Anton / Bauer Li-Ion ဘက်ထရီနှင့် Chargers ၏နယူး 7.2V စီးရီးကြေညာ
IBC 2015, ခန်းမ 11, E55 Shelton, မှန် CT (သြဂုတ်လ 27, 2015) ရပ် - Anton / Bauer, ဘက်ထရီတစ် Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ပံ့ပိုးပေးနှင့်ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်နည်းပညာများအားသွင်းသစ်ကိုကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါတယ် L- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုကင်မရာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ရှည်လျားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော Run-ကြိမ်ပူဇော်ကြောင်းစီးရီး 7.2V ဘက်ထရီနှင့်အားသွင်း။ Anton / Bauer ရဲ့အသစ်အစာရှောင်ခြင်း-အားသွင်း L-series ဘက်ထရီ ...
ဂျာမနီမှာဒီဗွီဘီ-T2 HEVC စမ်းသပ်မှုပံ့ပိုးဖို့သဟဇာတနှင့် Dimetis Partner
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - သြဂုတ်လ 27, 2015 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ။ , ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်နှင့် Dimetis, ဂျာမန် IP ကိုထုတ်လွှင့်ရှေ့ဆောင်, ထိုဖြန့်ဖြူးအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့အပြည့်အဝပေါင်းစည်းလယ်ကိုစမ်းသပ်သည့်စနစ်ကိုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းခဲ့ကြ ဂျာမနီမှာလာမယ့်မျိုးဆက်ကုန်းရုပ်မြင်သံကြားန်ဆောင်မှုများ။ သဟဇာတရဲ့ Electra (TM) X2 အဆင့်မြင့်မီဒီယာ Processor, ProStream (R) 9100 High-density ကိုစီးပေါင်းစပ်အသုံးချဖို့ ...
Canon ၏တိုက်ရိုက်သင်ယူ: အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစီးရီး Tyler Stableford စက်တင်ဘာ 30th-Oct1st Featuring!
ကမ္ဘာကြီးကသူ့စွန့်စားမှုများနှင့်စီးပွားဖြစ်ဓာတ်ပုံအဘို့အကျော်ကြားသူသည်အလင်း Tyler Stableford ၏ကို Canon Explorer ကိုနှင့်အတူပြဇာတ်အခင်းအကျင်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုဓါတ်ပုံပညာ၏အနုပညာ: Canon ၏တိုက်ရိုက်သင်ယူပိုင်ခွင့်တစ်ခု EOS ကံကြမ္မာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတင်ပြနေပါသည်! အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ CO စက်တင်ဘာလအပေါ် 30 အောက်တိုဘာလ 1st မှတဆင့် Aspen အတွက် Maroon ခေါင်းလောင်းမှာကျင်းပလိမ့်မည်! ပြဇာတ်အခင်းအကျင်းများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏အနုပညာ ...
B ကိုအတူ mini ကို trx +: LINK အသုံးပြုပုံများ Timecode စနစ်များအခုတော့သင်္ဘောတင်
B ကိုအတူ mini ကို trx +: LINK Compatibility ကို WORCESTER, ဗြိတိန် - - သြဂုတ်လ 27, 2015 Timecode စနစ်များ, Ltd. , timecode, ထပ်တူပြုခြင်းနှင့် metadata ကိုမျှဝေမှုအတွက်ကြိုးမဲ့နည်းပညာတွေအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးကြောင့်ယခုတင်ပို့လျက်ရှိသည်ကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ: mini ကို trx + ကိုလည်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်ဟုအများအပြားသစ်ကိုအဆင့်မြှင့်တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်အထိုင် options များကိုပေး။ "ကျနော်တို့မူလက super-ကျစ်လစ်သိပ်သည်း created: သေးငယ်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အသေးစား trx ...
Hitachi, HD ကင်မရာများနှင့်အတူ Image ကိုဗီဒီယိုအဆင့်မြှင့်မှုများ TV နဲ့မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု
Image ကိုဗီဒီယို Teleproductions, မြောက်အမေရိက Canton အခြေစိုက် Premiere ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်က၎င်း၏ 27-ခြေလျင်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှု၏တဦးတည်းတပ်ဆင်ထားပါတယ် - ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Woodbury, နယူးယော့, သြဂုတ်လ 2015, 30 ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ၏ကျယ်အထိစီမံကိန်းများအောင်မြင်မှုမှဝေဖန်နေကြသည် ကျယ်ပြန့် HD ကိုအဆင့်မြှင့်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လေး Hitachi Z-HD5000 HD ကိုကင်မရာစနစ်များနှင့်အတူကုန်တင်ကား။ အလားတူကင်မရာများမှာ ...
IBC 2015 မှာ Cobham မိတ်ဆက်က Ultra Flexible, ဆော့ဝဲ-သတ်မှတ်ထားသော transmitter
Cobham Tactical ဆက်သွယ်ရေးနှင့် Surveillance, တွေကို RF အထူးကုကုမ္ပဏီ, အ SOLO8 SDR, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေကို RF ဤလောကသို့ဖော်ပြချက် "software ကို-defined" ကြာသည့် Ultra-အသေးစားကင်မရာ-ပြန် transmitter ကို၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကြမယ်, ပါလိမ့်မယ်။ SDR Cobham ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်ထုတ်ကုန်များလာမယ့်မျိုးဆက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားတဲ့ "software ကိုသတ်မှတ်ရဒေီယို", အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြသ ...
Riedel ဂီယာသမ္မတနိုင်ငံရဲ့ 28th နှစ်မြောက်အပေါ် 50th ဆီးဂိမ်း၏စင်္ကာပူရဲ့ပွဲထောက်ပံ့
WUPPERTAL, ဂျာမနီ - သြဂုတ်လ 27, 2015 - စင်္ကာပူ Riedel ဆက်သွယ်ရေး '' အဆိုတော်ဒစ်ဂျစ်တယ် matrix ကိုအင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်နှင့် Acrobat ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်အား အသုံးပြု. လွတ်လပ်ရေး၏သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ 28th တစ်နှစ်နှင့် တွဲဖက်. အတွက် 5th အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ (ဆီးဂိမ်း) ဇွန်လ 16-50 တည်ခင်းဧည် ထိုအဖြစ်အပျက်ရဲ့အံ့မခန်းအဖွင့်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ပိတ်ပွဲမှအရေးပါချောဆက်သွယ်ရေးသေချာစေရန်။ 5,000 ထက်ပိုမိုအပါအဝင် ...
သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် HP က Moonshot ပလက်ဖောင်းပေါ် Vibe VS7000 ဆော့ဝဲကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာပြ
RENNES, ပြင်သစ် - သြဂုတ်လ 27, 2015 - သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကယနေ့ HP က ProLiant m7000 server ကိုကျည်တောင့်တပ်ဆင်ထားကာ HP က Moonshot စနစ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်အဆိုပါ Vibe (R) VS710 software ကိုအခြေခံပြီးလာမယ့်မျိုးဆက်ကိုဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ HP ကနဲ့သဘောတူညီချက်ကြေညာခဲ့သည် ။ "HP က 1996 ကတည်းကသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် 'ဆော့ဗ်ဝဲ-based ဖြေရှင်းချက်များအတွက်အရေးပါသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့, ကြှနျုပျတို့ကျေနပ်ခဲ့ရပါဘူး ...
5 ၏စာမျက်နှာ 55«ပထမဦးစွာ...«34567 » 102030...နောက်ဆုံး»